Indlu yendabuko kaMelina ngokubuka - I-Airbnb
Indlu yendabuko kaMelina ngokubuka
Ehlangothini elisempumalanga yentaba eluhlaza i-Centaurs endaweni ephakeme ngamamitha angama-500, yiKissos. Phakathi kwezihlahla ze-chestnut nezihlahla zendiza, uLwandle i-Aegean luhlangene nokuluhlaza kwesibhakabhaka. Indlu yakhiwe nge
I-traditional Pelion architecture, enamafasitela amaningi, inomumo ongasempumalanga obheke uLwandle i-Aegean, futhi ikhanyiselwe ngokukhanyayo.
Indlu iyisitezi esiphezulu sendlu enezitezi ezimbili, enezitezi zangaphandle, ingu-73 sq.m. futhi inamakamelo okulala angu-2, ngalinye linombhede ophindwe kabili, igumbi lokuphumula elineziko, i-TV, osofa nombhede osofa, ikhishi elivulekile nelihlome ngokuphelele kanye negumbi lokugezela elingu-1 elinobhavu wokugeza. Ukusuka kuvulandi, uphuza ikhofi lakho, ujabulela ukubuka okuhle kwentaba nolwandle.
Ebangeni elingamamitha angama-50. Kusuka endlini indawo yokupaka kamasipala futhi ngamamitha ayi-100., Ngaphansi komthunzi wezihlahla zendiza ezindala, isikwele sedolobhana. Lapho ungabuka isonto lase-Agia Marina, elakhiwa ngo-1650, elinezithombe zalo ezinhle eziqoshwe ngokhuni. Uzothola negrosa, ama-grill, amathaveni, amakhefi - amabha anezinto ezikhethekile eziningi namaswidi endabuko azobhekelela izivakashi ezifuna kakhulu.
Eduze kwendlu kunendawo yokubhaka yasesigodini, lapho ungazama khona izibiliboco ezenziwe ngezandla, ezimnandi nezinomsoco.
Sizimisele ukwenza ukuhlala kwakho endaweni yethu kube mnandi futhi kukhululeke ngangokunokwenzeka. Sizoba onawo nganoma yini oyidingayo. Ungaxhumana nathi ngocingo, WhatsApp, Viber, i-imeyili noma i-sms.
Inombolo yepholisi: 00001005678